Masaajid ku yaala xaafada Fittja ee kamuunka Botkyrka ayaa helay ogolaashihii ugu horeeyay ee looga adimi karo masaajid ku yaala wadanka Sweden.
Inkastoo aysan dhamaan arinta aadaanka ee Masjidka Fittja ayaa hadana gudiga Qorshaynta ee kamuunka Botkyrka waxay isku raaceen in aysan jirin wax sabab ah oo diidaya in Masaajidka laga adimo. Jaaliyada Muslimiinta ee Botkyrka ayaa dalabka sameeyay, iyagoo dalbaday in loo ogolaado in laga adimo sameecadaha masaajidka maalmaha jimcaha ama bisha Ramadaanka.
Ka dib markii ay fariisteen gudiga u qaabilsan arimaha Qorshaynta ee kamuunka Botkyrka ayaa dhamaan xisbiyada ku jira gudigaas isku raaceen arintaan marka laga reebo xisbiga Krist Demokraterna (KD) oo ku dooday in fariinta aadaanka ay tahay mid ay dhibsan karaan dadka kale (maadaama mu’adinka uu leeyahay Allah mooyee illaah kale ma jiro). Waxay intaas ku dareen in aysan gudiga kamuunka aqoon ku filan u lahayn arintaan in ay qiimeeyaan balse arintu ku fiicantahay booliska.
Si kastaba ha ahaatee, Masaajidka Fittja ayaa helay ogolaashihii ugu horeeyay balse waxaa la sugayaa in golaha sare ee kamuunka ay arintaan fadhi ka yeelan doonaan bisha soo socota. Maamulka masjidka Fittja ayaa sheegay in uusan masaajidka u dhaweyn goobaha xaafadaha sidaa darteedna aysan jirin cid dhibsanaysa arintaan.
Ogolaashaha uu helay masaajidka Fittja ayaa waxaa aad u soo dhaweeyay Muslimiinta Sweden oo aan horay loogu ogoleyn in ay ka adimaan masaajida banaankooda. Arintaan ayaa horay loo dhaliilay maadaama kaniisadaha loo ogolyahay in ay kambaleelka garaacaan balse Sweden ayaa ku dooda in wadankaan uu yahay wadan Kiristaan ah.
MAA SHA ALAAAAAAAH guul ayaan leeyahay sxb jimcaale
maasha alaah waa ilaahay mahadii ilaahay mahadii ilaahay ayaan mahad u celineynaa waa farxad weyn oo qiime weyn leh wax aad loogu farxo weeye ilaahay waxaan ka rajeyneynaa meel kasta oo aduunka ah ama bogcad kasta oo aduunka ah in laga adimo ilaahaynaa iyaga laftigooda waa bini aadan ilaahay ha hadeeyo oo xaqa ha tuso inshalaah aamii amiin
asc jimcale waa ilaahay mahadii waana arin qofkata oo islaam ahi ku farxo ilaahay waxaan rajeyneyaa in bogcad kasta oo aduunka ka mida ah laga adimo inshalaah ilaahayna kuwaa ogolaadey ilaahey ha hadeeyo xaqana ha tuso inshalaah
Maashaa Allaah waa guul usoo hoyatey muslimiinta guud ahaan, gaar ahaana kuwa deggan Sweden. Waxan wada ognahay in bulshada Swedishku ay u badan tahay Mulxidiin amase dad aan diinba haysan, waxan ku talin lahaa in inta aqoonta diimeed iyo luqada wadankaba ku fiican ay xooga saaraan siddii ay dadkan diinta u gaarsiin lahaayeen. Inshaa Allaah Masaajida dhimana waa loo ogolaan doonaa aadaanka cisi iyo sharafkuna waxuu ku jiraa islaamnimada.
Maasha Allaah waa wax lagu farxo waxaan ilaah uga baryayaa in inta dhimana ilaah uga soo fududeyo waana farxad usoo wada hoyatay dhamaan muslimiinta qaasatan kuwa dagan wadanka swedan
mashaa ALLAH WAA WAX LAGU FARXO
September 28, 2012 at 20:15
ALLAAH AKBAR DIINTEENA ALBAAB WALBA WAA GALEESAA WAAYO WAA XAQ
ALLAAH AKBAR DIINTEENA WAA XAQ
Allow muslimiinta u gargaar
TAKBIIR ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR ILLAHAY AYAA MAHADLEH ALXAMDULILAAH